AKAMASOA : « Taratry ny finoana velona natao tamin’ny asa mivaingana ity toerana ity » hoy ny Papa François
Rehefa vita ny lamesa lehibe notarihin’ny Papa François teny Soamandrakizay dia nihazo ny Akamasoa indray, omaly tamin’ny 4 ora folakandro. 9 septembre 2019
Tsiahivina fa ny Akamasoa dia toerana naorin’ny Mopera Pedro handraisana ireo sy mahantra sy sahirana eto Madagasikara. Tao amin’ity toerana ity no nihaonan’ny Papa tamin’ny Mopera Pedro niaraka tamin’ireo mponina maro be mipetraka eny an-toerana. « Finoana velona natao tamin’ny asa mivaingana, mahafindra tendrombohitra no hitanay tamin’ny fanorenana ity toerana ity, finoana nampihiratra ny anjara masoandro teo amin’ny toerana tsy nahitana izany.
Ny fampijoroana asa iombonana sy fitsinjovana ny fianakaviana sy ny ankohonana dia nahafahanareo nijoro ho mpandray anjara fototra manorina tantara vaovao », hoy ny kabarin’ny Papa François raha nitafa mivantana tamin’ireo vahoaka tao amin’ny Akamasoa izy io omaly io. Notsipihiny ihany koa fa haren-tsarobidy lehibe ny fiezahana sy fiaraha-miasa tamin’ny Mopera Pedro, ka nahatsangana io toerana io hiahiana ireo mahantra sy tsy manan-kohanina.
Nanome hafatra manokana ihany koa ny Papa François tao amin’ny Akamasoa. « Aza miraviravy tanana eo anatrehan’ny voka-dratsy ateraky ny fahantrana, aza manaiky velively ho resin’ny fakam-panahy mampihevitra fa vita mora tsy ilàna ezaka ny fianana », hoy ny hafany. Ankoatra ireo dia notsindriany ihany koa fa mba hahafahana mampijoro modelim-pandrosoana manome vahana amin’ny ady amin’ny fahantrana dia ilaina ny mametraka fitokisana sy fanabeazana, asa sy ezaka satria ireo no hitsinjovana ny fahamendrehan’ny olona. Nisaoran’ny Papa manokana ihany koa ny Mopera Pedro tamin’ny ezaka lehibe nataony ka nahatsangana ity tanàna vaovao ity.